नेपालमा हेवी इक्विपमेन्टको आयातमा कडाइ गरिनुपर्छ : अध्यक्ष कुँवर - Arthikbazar.com
नेपाल हेभी इक्युपमेन्ट व्यवसायी संघका अध्यक्ष र हजुरलाई नमस्ते ट्रेड लिङ्कका संचालक हुनुहुन्छ ताराबहादुर कुँवर । यहाँ प्रस्तुत छ हजुरलाई नमस्ते ट्रेड लिङ्क कम्पनि बारे , नेपालमा हेवी इक्विपमेण्टका आवस्यकता र सरकारले यो क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे हजुरलाई नमस्ते ट्रेड लिङ्कका संचालक ताराबहादुर कुँवरसंग आर्थिक बजार डटकमका लागि अप्सरा गौतमले गरेको कुराकानी :
हजुरलाई नमस्ते नाम कसरि रहन गयो ?
२०४६ सालमा काठमाडौँ आएर काम गर्ने वेलामा पंचायती व्यवस्था विरुद्द आन्दोलन थियो । चैत्र २४ गतेको आन्दोलनका बेलामा भोटेवहालमा हामि टेम्पो चलाउथौँ । बेलुका साथीलाई चलाउन दिए तर, भोलि पल्ट नेपाल बन्द भएकोले अघिल्लो रातनै बगी खानामा लगेर थुनेछ । भोलिपल्ट टेम्पो पल्टाएपछि त्यसमा बसेको प्रहरी भागि हाल्यो । आगो लगाउन आन्दोलनकारी तम्सिए । मेरो टेम्पोको पछाडी हजुरलाई नमस्ते लेखेको थियो । साथीहरुले त्यो देखेछन् र ड्राइभरलाइ पिटे जस्तो गरेर उनीहरुले कारखाना सम्म टेम्पो लगेर बचाए । त्यहि हजुरलाई नमस्ते शब्द बाटै टेम्पो बचेको हुँदा यहि नाम बाट हजुरलाई नमस्ते धुवानी सेवा , हजुरलाई नमस्ते कन्ट्रक्सन हुदै अहिले हजुरलाई नमस्ते ट्रेड लिङ्क प्रा. लि. खोलियो । अहिले म विश्वप्रसिद्ध सामानहरु भित्राएर व्यवसाय गरिरहेको छु ।
यसले कुन – कुन व्राण्डका सामानहरु विक्री वितरण गरिरहेको छ ?
अमेरिकन लुव्रिक्यांस , इटालियन आइटिआर लुव्रिक्यांस , हेवी स्पेयर पार्टस , युएसवि व्राण्डका कोरियाका व्रेकर , मलेसियाबाट मास फर्मुलामा जी. पी. लुव्रिक्यांस , दुवैबाट आइटिआर ब्रान्डको टायर , हेवी इक्विपमेण्टका स्पेयर पार्टसहरु लगायतका विभिन्न अन्तराष्ट्रीय ब्राण्डका सामानहरु विक्री गरिरहेको छु ।
अहिले यो व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?
व्यवसायको हिसाबले यो एकदमै राम्रो पेशा हो । यो पेशामा कहिलै नराम्रो र नक्कली समान बेच्ने काम गरिएन । तर यहाँ एउटाले सामानलाई अरुले गलत प्रचार गर्ने र असहयोग गरेका छन् । यी समान सबै विदेशबाट आयात हुने हुन् । त्यहि सामान नेपालीले ल्याउदा नलिने तर, विदेशीले ल्याउदा चाँहि हारालुछ गरेर लिने हामि नेपालीको बानि छ । अहिले हेवी इक्विपमेण्टहरुको आयु बढाउन लुव्रिक्यंस अति आवस्यक हो । सामानहरु नगद भन्दा पनि उधारोमा बढि विक्री भैरहेको छ । बजारबाट उधारो पैसा उठाउन र बैंकलाई समयमा व्याज तिर्नु व्यवसायको मुख्य चुनौती हो ।
सरकारले यो क्षेत्रको विकासमा के गर्नु पर्छ ?
यो ट्रेर्डिङ्ग क्षेत्रमा नक्कली सामान ल्याउनेहरुलाई रोकिदिनु पर्यो । सामानहरुको मूल्य तोकिदिनु पर्यो । व्यापारीले हैन सरकारले सामानहरुको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्यो । जसले गर्दा आम जनताहरु ठगिनु पर्दैन । नेपालमा २० हजार भन्दा बढि हेवी इक्विपमेण्टहरु छन् । हेवी इक्विपमेन्ट पनि आवस्यक मात्र भित्राउन दिनु पर्छ । मैले यो क्षेत्रमा काम गर्न थालेको १२ वर्ष भयो । तर, यो जेठ देखि हामीले काम पाएका छैनाँै । मानिसहरु अरुले जुन व्यवसाय गर्यो त्यहि गर्ने हुनाले अहिले यो व्यवसाय गर्न नि गाह्रो भएको छ ।
अहिले गाँउपालिका , नगरपालिका लगायत केहि प्रभावशाली व्यक्तिले पनि आफै नयाँ किनेर चलाउनु भएको छ । नयाँ किन्नु , व्यवसाय र विकास निर्माण गर्नु राम्रो हो । तर हामीसंग भएका सामान किनेर व्यवसाय गर हामीले हेवी एक्विपमेण्ट त्यतिकै थन्काएर राख्नु पर्दैन थियो । हामीले भाडामै दिने हिसाबले यी मेसिनहरु थन्किएर बसेका छन् । यी जम्मा ४ प्रतिशत भन्सारमा आउने हुनालेकर को पनि दुरुपयोग र देशको पैसा पनि विदेसी रहेको छ । आवस्यकता र काम हेरेर मात्र आयातको अनुमति दिनुपर्छ ।
अन्त्यमा केहि भन्न बाँकि छ ?
ग्राहकहरुविना हाम्रो पनि केहि चल्दैन । व्यापार भनेको विश्वास र इमान्दारितामा चल्ने कुरा हो । सामान किन्दा सक्कली सामान किन्नुहोस् । सम्भव भएसम्म नेपालीहरुले ल्याएको सामान किन्दिनुहोस् । हामि थोरै मात्र नाफा राखेर सामान दिन तयार छौँ । तपाइहरुको प्रगति हुदाँ नै हाम्रो पनि प्रगति हुने हो । व्यवसायमा एउटाले अर्कोलाई असहयोग हैन सहयोग गरेर जानुपर्छ ।